1. Zvinongedzo zvinopa zvese zvinonaka uye zvinonaka kuravira Vanogona kugadzirwa kuita siginecha dhishi iyo munhu wese yaachada, senge spaghetti, saladi, kana sekudya kwekuseni kwakanaka. Kunyanya pakupera kwegore Ndivanaani vari kuzoita mabiko mumba Nhasi tine nzira yekuita bhekoni tichishandisa ovhoni yekuwedzera inova, inonaka uye inonhuwirira kudzimba nhatu, dzimba sere. Uine menyu yakapfuma muprotein nemafuta kuti unakirwe nemamiriro ekunze anotonhora ingoshandisa ovhini yakapusa kuti uwane chikafu kana zvinongedzo kuti uperekedze kosi huru.
2. Chii chinonzi bhekoni? Vanhu vazhinji havasati vaziva !! Nekuti bhekoni rakagadzirwa kubva mudumbu renguruve Asi yakawedzerwa mushure mekuisa munyu uye nekusiya nguva yakati rebei. Inodaidzwa yakawedzerwa kana kuwedzerwa mukuchengetedza chikafu kuti urambe uchidya wakareba. Mvura chete, munyu, shuga, sodium nitrite uye sodium ascorbate ndiyo nzira huru yekuchengetedza inoshandiswa mukugadzira nyama inonhuwirira. Chengetedza kutonhora uye uisiye kusvikira yava Midziyo inoshandiswa kubheka bhekoni • Bhakoni remhando yepamusoro
3. Isa zvidimbu zvebhekoni mundiro kana kubheka tireyi. Nokufumura bhekoni kuitira kuti nyama ipetwe kana kufukidzwa nechimwe chidimbu Kuti uwane kupisa mukati meplate Inogona kuiswa pamusoro pealuminium pepa rinoshandiswa pakubika. Yekuchenesa nyore
4. • Isa ndiro yakagadzirirwa bhekoni muchoto. Wobva waisa tembiricha pa205 •. • Bika bhekoni parutivi rwekutanga kwemaminetsi gumi nemaviri kusvika gumi nemashanu. • Shandura bhekoni riende kune rimwe divi. Wobva waisa muchoto kwenguva imwechete
5. Yakatsvinda, yakanaka, bvisa kuronga ndiro
6. Menyu inonaka inoshandisa bhekoni muchoto zvakakwana uye nyore inogona kudyiwa sechinhu chisina chinhu chinokwezva nekuda kwemunyu, mafuta, kuravira zvishoma uye hwema hwehuni hunobva muutsi. Icho chakakomba chikumbiro. Vanoiisa pachingwa, chizi uye miriwo yavanoda iVanwich Bacon iyo vana yaasingazombokanganwa. Chiise musalad yemuriwo wobva wawedzera chizi, isadhi yaKesari, dhishi rinonaka pamwoyo wako. Fukidza spaghetti carbonala Inowedzera hunyoro kune wese munhu chikafu chaanofarira chinonaka zviri nani. Zvisinei, bhekoni chikafu chine mafuta akawanda. Kudya zvine mwero kunobatsira muviri. Asi kudya zvakawandisa Zvichava nemhedzisiro yakaipa Ngatiitei madhiri anonaka Mugore reiyo pateni, kubva pane yakapusa ovhoni-yakabikwa bhekoni nzira, hwema hwehwema hwunopararira, huchiwedzera kudziya uye zororo ndangariro.